Ukuzoba iZakhiwo zikaLewis Dot zeKhemistry
Iindleko zangaphambi kwexesha 13
Icandelo leChemistry Workbook yeeDummies Cheat Sheet
Kwi-chemistry, ukuzoba izakhiwo zamachaphaza ka-Lewis kunokuba ngumceli mngeni, kodwa zibonelela ngobutyebi bolwazi malunga neemolekyuli ezimele zona. Khumbula ukuba izakhiwo zamachaphaza zikaLewis zitsaliwe ngokudibeneyo (molekyuli) iikhompawundi ezabelana ngee-elektroni. Landela la manyathelo alula ukuzoba ngokuchanekileyo ulwakhiwo lwamachaphaza ka-Lewis:
Yongeza inani elipheleleyo lee-elektroniki ze-valence ezifumaneka kuyo yonke indawo.
Musa ukulibala ukubandakanya naziphi na izityholo ezilungileyo nezingalunganga xa umisela oku.
Zoba ubume obulula (ubume bamathambo) bekhompawundi ngokudibanisa yonke into ngeebhondi enye kuphela.
Yongeza ii-elektroni kuzo zonke iiathom ezingafakwanga.
Qaphela ukuba uninzi lweeathom zifuna ii-elektroni ezisibhozo zizonke, ke iiathom ezinebhondi enye ziya kufuna ukufumana ii-elektroni ezintandathu. Nangona kunjalo, i-hydrogen ifuna ii-electron ezimbini kuphela; ibhondi nganye ibalwa njengee-elektroni ezimbini ekwabelwana ngazo, ke sukufaka naziphi na ii-elektroni kwi-hydrogen.
Beka naziphi na ii-electron ezingasetyenziswanga kwi-atom ephakathi.
Ukuba zonke iiathom (ngaphandle kwehydrogen) ngoku zineeelectron ezisibhozo, ugqibile.
Ukuba iathom enye okanye ezingaphezulu azinae-elektroni ezisibhozo, kuya kufuneka wenze iibhondi eziphindwe kabini okanye kathathu phakathi kwazo.
I-lotrimin yosulelo lwegwele
Gcina ukhumbule ukuba ibhondi nganye ibalwa ngee-electron ezimbini ezabelwana ngazo.
Ukuba zonke iiathom ngoku zinee-elektroni ezisibhozo ezijikelezileyo, ugqibile. Ukuba unayo i-valence electron esele, yongeze kwi-athomu ephakathi, nangona iphula umthetho we-octet.
kuphi ukubona ukhuphelo lusiya pc
ungasebenzisa i-biofreeze ngelixa ukhulelwe
iziphumo ebezingalindelekanga ze-lexipro
khuphela kwaye uncamathisele kwi-minecraft